"Taa, m na-adịghị eche dị ka eme ihe ọ bụla
M nnọọ wanna dina m bed
Echela ka atụtụ ekwentị m, n'ihi ya, na-ahapụ a ozi na ụda
'Ime ka taa, m na-aṅụ iyi m na-adịghị eme ihe ọ bụla
N'elu lyrics bụ site Bruno Mars - The umengwụ Day, nke ihe ọtụtụ ndị chọrọ ime na Ụbọchị Ekeresimesi dim. Ọ dịghị azụmahịa, ọ dịghị ọmụmụ, dị nnọọ nwere ụfọdụ fun na ezinụlọ na ndị enyi. Ya mere, i nwere ike mkpa ụfọdụ Christmas onyinye echiche maka ikom na ndị inyom. Ego m ndepụta na ị ga-ihe n'ike mmụọ nsọ.
Part One - Top 5 Christmas Onyinye echiche maka Men
Part Abụọ - Top 5 Best Christmas Onyinye echiche maka Women
N'ihi na ndị mmadụ, Ụbọchị Ekeresimesi pụrụ ịbụ eluigwe ma ọ bụrụ na ị maara otú ẹnyene ha na adabara onyinye dị ka ndị na. N'ozuzu-ekwu okwu, ndị ikom dị ka video, egwuregwu na video egwuregwu. Ya mere niile kasị mma Christmas onyinye ga-iwete n'etiti n'elu 3 isiokwu.
1. gụgharia Player dị ka Chromecast / Apple TV / Roku
Mgbe ayak ma ọ bụ ọbụna na-anwụ n'elu n'ihe ndina n'oge Christmas, ị nwere popcorn na Pepsi na aka, ihe ị chọrọ n'aka ekpe bụ nanị ihe ndị magburu onwe nkiri dị ka Interstellar ma ọ bụ ofe usoro dị ka The Big ọganihu Theory. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị mfe iji nweta ihe niile online, ma i nwere ike enuba Obodo media ka TV na nkwanye Player dị ka Chromecast / Apple TV / Roku na-eme ka a ọdịiche. Inwe otu gị nwoke enyi, ọ ga-ekele gị maka a magburu onwe onyinye. Ọ bụrụ na ị chọrọ ile ụfọdụ Christmas fim, ego ebe a.
2. Video Games dị ka oku nke ọrụ: Advanced Warfare
Ọ dịghị onye ga-ajụ anwansi nke egwuregwu vidio. A maara m ụfọdụ ụmụ okorobịa ndị nwere ike ndụ na-enweghị inyom ma ike ndụ na-enweghị video egwuregwu, ọbụna nanị otu ụbọchị. N'ihi gịnị? Enyi m Jim gwara m na i nwere ike bụghị image na enyi o wuru na egwuregwu enyi online maka gara aga 4 afọ. Ị adịghị egwu egwuregwu ọ bụla ọzọ, ị kwụsịrị enyi. Ndị niile na-akpa ọchị stof, unyi njakịrị bụ site na ha. Nke ahụ bụ obi ụtọ isi iyi. M a girl, m ike image, ma m na-eche na nke ahụ bụ yiri ikpe na m nwere ike na-enweghị Facebook.
3. Xbox Otu ma ọ bụ PlayStation
Otu ihe ahụ mere na nke abụọ echiche, Xbox Otu ma ọ bụ PlayStation bụ magburu onwe onyinye nhọrọ. Ndị ọhụrụ version kwesịrị ịbụ ihe kasị mma. Ọ nwere ike na-eri aka gị na ụkwụ, ma ike-eweta nnukwu mberede ka gị nwoke enyi. Adịghị agwa m, gị mgbe na-agbalị na-egwu egwuregwu dị ka Super Mario na ndụ ụlọ na Izu ụka ma ọ bụ ụfọdụ ezumike dị ka Christmas. Ị nwere ike ọnwụ a nnukwu ohere iji kpọgidere na ndị enyi ma ọ bụ families.Check otú preorder Xbox na PlayStation ebe a.
N'ihi na ndị na ụmụ okorobịa ndị na-adịghị amasị ọgụ na kwaa, ị nwere ike bulie ụfọdụ nkà onyinye dị ka Ekweisi, nke nwere ike inyere ha aka iji zuru ike n'oge ọ bụla n'ebe ọ bụla mgbe plọg n'ime music ọkpụkpọ. Na ezi ihe ụfọdụ stof ka gbagwojuru pụrụ ịnapụta amamiihe audio boutique maka ndị enyi gị. Emeghe gị akwụkwọ, na-etinye on ekweisi, na-amalite na-egwu Bruno Mars umengwụ Day, ihe a umengwụ ụbọchị bụ!
Di m ịhụnanya kọfị, ọ sịrị ndị kasị mma ụlọ ọrụ na ụwa a na-anọ n'elu bụ kọfị. M ukwuu obi abụọ ya, n'ihi na m na-agụ a ozi ọma banyere n'akụkụ mmetụta nke a nwa ofe. Otú ọ dị, anyị apụghị ileghara amara gị nwoke enyi, ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ike chepụta mma Christmas echiche, na-agbalị inye ya a Nespresso.
Jiri ya tụnyere ndị ikom, onyinye n'ihi na ndị inyom na-nnọọ mfe. Ị pụrụ nanị isi na 2 iwu: mara mma ma na ihunanya. Ihe ọ bụla nwere ike ime ka ya na-eche mara mma dị ka akpa, jewelries, akpụkpọ ụkwụ, esi ísì ụtọ, lipsticks bụ ezi nhọrọ. Ihe ọ bụla ọnọde ihunanya nwere ike ịbụ Nhọrọ. Ma na-eleghara ụfọdụ ala-ọgwụgwụ imekwa eji ihunanya nkà dị ka Roses, Chọkọletị, Sexy Akwa ime ahụ na na. A bụ m ndepụta maka gị akwụkwọ.
6. senti na Akụkọ
Ọtụtụ nwoke enyi m gwara m na ha maara na ha kwesịrị bulie ihe dị ka senti na-girlfriends, ma nke onye kwesịrị ịbụ mma. My azịza ya bụ na ọ dabere na ihe ụdị pụtara na ị chọrọ ụgwọ ọrụ ya. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ Lancôme Magic senti, ị kwesịrị ị na-agwa ya anwansi oge mgbe ị izute ya ma ọ bụ otú anwansi ọ na-egosi na gị dara ogbenye ndụ. Ọ bụ na unu enweta ya? A senti na a kwesịrị ekwesị akụkọ, zuru okè Christmas onyinye echiche!
7. Nwayọọ-okomoko akpa
Ụmụ agbọghọ na-ụmụ agbọghọ. Ha nwere ike ghara ịbụ ọtụtụ ego-efe ofufe, ma e nwere ka ụfọdụ obere unyi tụnyere n'etiti ha. Ịzụta ụfọdụ nwayọọ-okomoko akpa dị ka Coach ma ọ bụ Mk maka gị nwaanyị enyi na ọ ga-akwụ gị ụgwọ ihe karịrị nanị a nsusu ọnụ na nke a Christmas.
Chọrọ ịgwa ya ị hụrụ ya n'anya ruo ogologo oge na nke a Christmas? Unu maara onyinye nke kwesịrị kwesịrị ekwesị? M ukwuu nwere ike ikwu a lipstick dị ka Tom Ford na "Spanish Pink" ga-adị mma n'ihi na ị. Ọ dịghị mkpa bụ ihe ụdị agba ọ bụ, ọ bụ nwa agbọghọ, ọ agbarapụ a n'anya agba. M onwe m kwa!
9. selfie Igwefoto
Bụ n'ebe ọ bụla nwa agbọghọ mara mma gburugburu gị anaghị amasị selfie Naa? M na-eche nti azịza kwesịrị maa na-elekọta-adịghị mma. M hụrụ n'anya selfie kwa, n'ihi na ụfọdụ selfie igwefoto ka Casio TL350 juru m na m nwanyi enyi ruo n'ókè ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị bụghị maara na selfie igwefoto ma ọ bụ i nwere ike dị nye ya iPhone 6 gbakwunyere, nke nwere 8-megapixel iSight igwefoto. Ma, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike gosi ọ ga-adị ka enyi gị nwanyị otu ụbọchị ma ọ bụ ị ga-atụfu bụghị naanị a oge nke mmekọrịta ma $ 399.
The cookbook kwesịrị ikpeazụ nhọrọ m ndepụta, ma ọ bụghị ndị kasị njọ nhọrọ. Ụfọdụ ụmụ agbọghọ dị ka selfie, ụfọdụ ụmụ agbọghọ dị ka okomoko stof, e nwere ndị ka ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-n'anya nri. M n'anya nri kwa. Mgbe m nwere mapụtara oge dị ka nke a Christmas, ọ ga-abụ m kasị mma ụtọ iji kwadebe nnukwu nri abalị maka dum ezinụlọ. Họrọ ụfọdụ ezi na-esi nri akwụkwọ dị ka Ụbara More, ị pụrụ ịnụ ụtọ a na-atọ ụtọ Christmas ozugbo!
Niile na ihe niile, n'agbanyeghị ihe ụdị Christmas onyinye ị njikere maka ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ, mee ka ya si gị n'obi. Ị ga kwesịrị a ekele nsusu ọnụ ma ọ bụ mmakụ. Ụfọdụ ndị ọzọ ịga nke ọma onyinye echiche m na-eji ya ike a Christmas ekele videos mgbe m na-agba ndị enyi m iji sonyere m Christmas ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere otutu photos, na obere vidiyo na ekwentị mkpanaaka gị, ị pụrụ ịtụle eke a video onyinye iji zipu site na email, òkè on Facebook ma ọ bụ ọkụ na-DVD kwa. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) pụrụ ime ka ọ eme onye-nkwụsị. Download free ikpe version n'okpuru.
> Resource> Video> Top 10 Christmas Onyinye echiche maka ikom na ndị inyom